Igumbi elibanzi kwiMansion eneminyaka eyi-100+ ubudala
Amagumbi akwi-Mansion agcinwa ngendlela efanayo nangeminyaka yoo-1900. Amagumbi okuhlamba acocekile kwaye omile kwaye agcwele izinto zangasese ezifunekayo. Igumbi ngalinye kwibhloko ephambili linebalcony, evula ubomi obujikeleze iMansion.
Inkonzo yegumbi ayonwatyiswa ngononophelo olukhulu ukuthintela izinambuzane. Amagumbi akwi-ambience yelali azolile kwaye alungele ukulala kamnandi ebusuku. Zonke iinzame zenziwe ukukunika iLifa leMveli lokwenyani lokuHlala ngaphandle kokuyekelela kubutofotofo bale mihla.
Le Mansion yenye yezona ndawo zinkulu kwezingama-3000 kunye nezindlu zooNokhaya ezisasazeke kwiilali ezingama-72 kunye needolophu ezi-2 apho kuhlala iiChettiars, kwindawo eyaziwa njengeChettinad.
Iiprinta eziluhlaza ze-Mansion zagcinwa kwaye umzukulwana wesizukulwana sesithandathu uthathe iintlungu zokuyilungisa le nto ichazwe apha.
Yakhiwe ngexesha le-1902, i-Mansion isasazeke ngaphezu kwe-80,000 yeenyawo zesikwere kwindawo. ILifa leMveli le-Mansion likhuselwe ngononophelo kwaye amagumbi ayi-8 avulekele iindwendwe ezifumana inyhweba yabucala.
Ukwakhiwa kwaqalisa ngowe-1902 yaye kwathabatha iminyaka elishumi ukugqitywa. Le ndlu inkulu kwaye amagumbi ahonjiswe ngokusetyenziswa ngokugqithisileyo kweBurmese Teak Wood, iMarble yaseItali kunye nentsimbi yesiNgesi. Iqulethe iinkundla ezininzi, iiholo kunye neepaseji ezineentsika eziqingqiweyo. Umyinge weenkundla kunye neepaseji zininzi kakhulu, zilinganisa okona kulindelweyo kwakho. Xa umntu engena kwindlu enkulu umntu udlula kwiyadi engaphambili equka isityalo semveli saseTulsi kunye neveranda. Ngaphaya kwe-portico kukho iveranda entle yokunqumla ekhokelela kwiholo yebhastile. Umgangatho wenziwa ngebhastile elimhlophe nelimnyama laseItali kwaye iintsika zezebhastile elimnyama elibengezelayo. Le yiholo yomtshato. Okulandelayo kuza intendelezo enkulu enemigangatho emibini exhaswe ziintsika zentsimbi. Umgangatho wesibini unamagumbi okulala aneendonga ezintle kunye namagumbi okuhlambela ancanyathiselweyo. Igumbi lokulala ngalinye linendawo yokungena kwibalcony ende eqhelekileyo ejonge esitratweni. Kusuka apha ukuze ukwazi ukubukela ubomi bemihla ngemihla buqhakaza kunye nolunye uphahla lwelali olupeyinta isibhakabhaka esicacileyo. Ishawa evulekileyo nayo inikezelwe kwibalcony.
Emva kweNkundla enkulu kukho enye iholo, elandela leyo ingena kwenye intendelezo ebizwa ngokuba yintendelezo yesibini. Kwaye kanye embindini wale ntendelezo kukho indlela. Kumacala omabini ale ntendelezo kukho iiholo zokutyela ezimbini ezinkulu ezibizwa ngokuba yiHolo yaseBojana (Yokutya). Kukwakho nentendelezo yesithathu kunye neyadi enkulu engasemva. Iintsika kwiinkundla ezahlukeneyo zenziwe ngezinto ezahlukeneyo. Iintsika ezingaphambili zevarandha zenziwe ngodaka lwekalika kwaye ezo zikwiholo yomtshato zenziwe ngebhastile elimnyama. Iintsika kwi-pattalai phambi kwenkundla ephakathi ziqiniswe ngomthi we-porisu, othatha umthwalo oxinzelelekileyo ngaphezu kwezinye iinkuni. Kwakhona kuthatha ipolishi kakuhle. Ngelixa iintsika kwiyadi yesibini yenkundla zenziwe ngentsimbi, ezo zesithathu zenziwe ngamatye. Ngokufanayo, umgangatho nawo uyahluka ukusuka enkundleni ukuya enkundleni. Iindidi ezahlukeneyo zomgangatho zibandakanya i-lime mortar, i-marble, i-Athangudi tiles, i-Anai adi Kallu, njl njl.
I-Chettinad likhaya le-Nattukottai Chettiars, ibhanki ephumelelayo kunye noluntu lwamashishini kunye ne-Nattar Vallambars - uluntu lwama-feudal. Ikwaziwa nangokutya kwayo kwalapha ekhaya, uyilo, kunye neetempile zonqulo.
Ummandla waseChettinad waziwa kakhulu ngezindlu zawo ezinkulu zenkulungwane ye-19, ezineentendelezo ezibanzi kunye namagumbi abanzi ahonjiswe ngebhastile kunye netiki. Izinto zokwakha, izinto zokuhombisa kunye nefenitshala zazingeniswa kakhulu kumazwe aseMpuma Asia naseYurophu. Ibhastile laziswa livela e-Italiya, iikhansile kunye ne-teak evela eBurma, izitya ezivela e-Indonesia, iikristale ezivela eYurophu kunye nezipili ezisuka eludongeni ezivela eBelgium.
Uninzi lwezi zindlu ezinkulu zakhiwa kusetyenziswa uhlobo lwelitye lekalika elaziwa ngokuba yikarai. Intsomi yasekuhlaleni ithi iindonga zendlu enkulu zazikhazimliswe ngentlama eyenziwe ngamaqanda amhlophe ukuze zibe lula.
I-Kanadukathan idume kakhulu ngokutya kwayo e-Chettinad kunye nokwakhiwa kwezindlu zayo, ezineminyango yazo ephambili eyenziwe ukuba ifane neyeetempile.
Abasebenzi bethu bendawo ekuchithelwa kuyo iiholide bakhona ukuze bakukhonze ngexesha lokuhlala kwakho.